ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: NYP Concert (20.07.08)
စာရေးသူ: s0wha1 Labels: ကူးယူးဖော်ပြခြင်း, ကြေညာချက်
Nanyang Poly ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ကပွဲ (သင်္ကြန်ပွဲတော်လို့ ဆိုရမလား၊ Myanmar Cultural Show လို့ပဲ ပြောရမလား) ကို လာမယ့် ဇူလိုင် 20 ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Poly ကျောင်း ၅ ကျောင်းထဲမှာ ဒီနှစ် နန်ယန်းသင်္ကြန်ကတော့ နောက်အကျဆုံး ကျင်းပတာ ထင်ပါတယ်။ ဒီပွဲကို နှစ်လကျော်ကြာ ကြိုးစား ပမ်းစားနဲ့ သေချာပြင်ဆင် ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ NYP မှာ မြန်မာပွဲများကို ကျင်းပခွင့်မရခဲ့တာ အတော်ကြာပါပြီ။ ခုလည်း RP မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာမှု၊ မြန်မာ့ အလှ၊ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာကို ပိုမို အသက်ဝင်စေမည့် NYP ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးများ၏ ရိုးရာနှင့် တိုင်းရင်းသား အကပဒေသာများ...
ရသစုံလင် ပြည့်နှက်စွာ၊ ဟာသများဖြင့် ဖြည့်စွက်ထားသော အငြိမ့်နှင့် ပြဇာတ်...
ယခင်နှစ်များနှင့် မတူ၊ တမူကွဲ ဆန်းပြားမည့် NYP Radio ကဏ္ဍ...
စူးရှ၊ မြူးကြွဖွယ် Beats များနှင့် ခုံမင်ဖွယ် Instrumental taste များ ပါဝင်သော Concert အစီအစဉ်...
မြန်မာ့သဏ္ဌာန်ကို ထင်ဟပ်ဖော်ကြူးသော Model Show နှင့်အတူ အခြားသော ရိုးရာနှင့်အညီ၊ မူဟန်မပျက် တင်ဆက်ထားသော program များ...
အမှတ်တရ မေတ္တာလက်ဆောင်များ ပြန်လည် ပေးသွားမည့် အစီအစဉ်...
တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပိုမို ထူးခြားသော အစီအစဉ်သစ်များ...
နေ့ရက် - ၂၀၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၀၈
နေရာ - The Republic Culture Center
(Republic Polytechnic, Near Woodlands MRT)
အချိန် - နေ့လယ် ၁း၃၀ မှ ၇း၃၀ အထိ၊
၀င်ကြေး - စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ ၁၂ ကျပ် ၊ ၁၅ ကျပ်
လက်မှတ် ၀ယ်ယူလိုလျှင် - ၉၀၀၃ ၇၈၀၄၊ ၉၁၈၅ ၅၄၃၁။
နန်ယန်းကျောင်းတော်သူ၊ ကျောင်တော်သား မောင်လေး၊ ညီမလေးများရဲ့ ကပွဲကို လာရောက် အားပေးနိုင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ရေးပြီးချိန်: 7/11/2008 03:59:00 PM
14 Jul 08, 00:47
thiri: ma ma.. thks for the advertisement for our nyp culture show. and wish to c u also. we are tryna to do our best. thks neway. =)